KHAMRIGA CADOWGA AH EE KHATARTA AH: SIFIR, SAWIR, DARYEEL IYO DAYACTIR - BEERAHA DIGAAGA
Siberian White Guinea Fowl: Qalabyada Haysashada Guriga
Fowl-guinea shimbir shimbir ah ayaa ka yara badan digaag, inkastoo ay tahay qaraabada dhow. Si kastaba ha ahaatee, guurka ee shimbir ka bilowdey waqti ka dib. Maaha wax la yaab leh in xilligan, nin ayaa soo saaray tiro badan oo ka mid ah noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan, iyo shaqadan si joogto ah ayaa socda. Mid ka mid ah noocyadaas cusub ee taranta taranka waa fowlaha guinea cad cad.
Sida magaca caanuhu soo jeedinayaan, Siberia waa meesha lagu magacaabo shimbirta. Si aad u qeexdo - magaalada Omsk. Waxaa intaa dheer, taranka ayaa sababay sababo gaar ah.
Xaqiiqdu waxay tahay in Ruushka, shimbiraha guinea ayaa taariikh ahaan loo arkaa inay yihiin shimbiro qurxin ah, oo aan la aqbalin inay isticmaalaan hilibkooda cuntadooda, oo ay ku jirto midabka mugdiga ah ee baqashada, taas oo aan caadi ahayn maskaxdeena. Intaa waxaa dheer, in wax soo saarka ukunta, haadda guinea ahaayeen kuwo aad u liita digaagga, taas oo sameeyey taranta beeraha aan faa'iido lahayn.
Ma taqaanaa? Gowraca qadiimiga ah ee Giriigga guinea waxaa loo tixgeliyaa shimbiraha quduuska ah iyo geedaha ilmanimada ah ee ilmanimada iyo bacriminta Artemiska. Sida laga soo xigtay mid ka mid ah ereyada, godadku wuxuu u beddelay walalaha Meleagra galay Kesarok, kuwaas oo ku dileen kaniinigii ugu xumaa ee ugu horreeyay, kaasoo Artemis u diray dadka aargoosiga ah ee aan loo keenin iyada, ka dibna aan rabin inuu la wadaago dadka kale ammaanta guusha, xataa adeerkiis. Boorashka dahabka ah ee digaaggu wuxuu xiriir la lahaa Giriigta iyada oo ilmo dhalinyaro ah oo ilmo ah.
Ka dib Dagaalkii Labaad ee Adduunka, 4 machadyo cilmi-baaris ah ayaa isla markiiba ku hawlan sidii loo xallin lahaa su'aalaha ku saabsan taranka hargabka ee Midowga Yurub:
genetics guud ee USSR Academy of Sciences;
Machadka Cilmi Baarista Siberian (Omsk);
Machadka Farsamada iyo Farsamada ee Siberian iyo Machadka Farsamada iyo Teknolojiyada ee Xoolaha (Novosibirsk);
Machadka Cilmi-baarista Isku-dubaridaha ee Union-ka (Zagorsk, gobolka Moscow).
Mid ka mid ah hawlaha istiraatiijiga ah ee cilmi-nafistiyu u dejisan naftooda waxay ahayd in la helo ilmo leh midab khafiif ah maqaarka iyo wax soo saarka sare.
Hawsha ugu horreysa waxaa xalinayey koox shaqaale ka ah Machadka Cilmi-baarista ee Siberian ee hoos imaanaya hoggaanka L. N. Veltsman. Sida badanaa kiisaska sayniska, fursadu way caawisay. Sanadkii 1968-dii, shimbir gawaarida gawaarida ee loo yaqaan 'guinea beers-ka' ayaa laga soo dejiyey Hungary markii uu dagaalku bilowdey isla markaana uu noqdey saldhig ka mid ah hawlaha taranka, oo sabab u ah isbedel dabiiciga ah, 3 shimbir ayaa u muuqday balaayad aan caadi aheyn. midabka cad.
Ka akhri faa'iidooyinka hilibka iyo ukumaha fowlka guinkaa.
Midabka iftiinka ee hunqaha guinea waa mid soo noqnoqonaya, taas oo ah, ma muujin lafteeda marka la maro shakhsiyaadka kale ee midabada caadiga ah, sidaa awgeed waxa kaliya oo lagu xallin karaa shaqadii dheeraa iyo dadaalka shaqada ee 3 soo bandhigay dabeecadda sayniska lafteeda isku-dhafka. Nasiib wanaag, waqtigaa lama seegin, shaqaduna waxay bixiyeen natiijooyinkoodii. Sanadkii 1978, nooc cusub, oo magaciisa lagu magacaabo gobolka oo uu ku guulaysatay inuu soo saaro, caddaan ah Siberian, ayaa si rasmi ah loo diiwaan geliyey.
Maxay u eg yihiin?
Waxaa xiiso leh in dadka reer Sierraayo ay ka duwan yihiin qaraabadooda caajiska ah ee aan ciriiri lahayn oo kaliya ma aha midabka baalkooda. Maqaarkooda, oo ay ku jiraan boogaha, sidoo kale waa iftiin, oo leh maro casaan, taas oo caan u ah albinos, taas oo shimbirahan ay ku jiraan dareen gaar ah.
Ma taqaanaa? Magaca "guinkaa guinka" ee ku yaalla Ruushku waxa uu xidhiidh la leeyahay ereyga "Kaysar" ("Caesar"), taasi waa boqorkii. Inta badan, magaca noocan oo kale ah kuma xirna muuqaalka shimbiraha (waxaa jira royal ah oo ku jira, si daacad ah), laakiin xaqiiqda ah in markii hore bakhaaro delicious loogu talagalay miisaanka boqortooyada, iyo saboolka ma awoodi kari waayeen sida noocan oo kale ah.
Madaxa: qadar yar, oo cad oo cufan buluug ah. Kaadi waa casaan cad oo midab leh, cufan, weyn iyo fareem. Muuqaal muuqaal ah - jiritaanka bac ah guduud ("baraha") hoostiisa hoostiisa.
Beak: cawl, miisaan dhexdhexaad ah, waxoogaa hoos u jajabiyey caarada.
Qalabka: dheer, saboolka ah baadigoob.
Guntin: monochromatic, dufan, midab cream leh oo cad oo leh wareegyo yaryar oo la arki karo xataa xitaa iftiin yar oo dabiici ah (nooc ka mid ah qaabka la jajabiyey ee haraaga guinea lakabka ah). Fowlka guinea ee khatarta ah ayaa haya xajistooda sarraysa ilaa xilliga dayrta.
Torso: ballaaran oo dhererkiisu yahay 45-50 cm oo dherer ah, oo leh laab laab oo si fiican u horumarsan (gaar ahaan dumarka). Gadaal ayaa si habboon u gudubta daboolka.
Lugaha: gaaban, maadada ciriiriga.
Dabadeed: aad u gaaban, "aan wax-qabad lahayn", hoos u dhaceen, sii waday qadka toosan ee dhabarka.
Baalasha: yar yar, oo ku xiga jidhka, isku xirka saldhiga daboolka.
Marka lagu daro boodh la cadeeyay, Saaxiibada Siberian ayaa u suurtagashay in ay ilaaliyaan tayada wax soo saar leh ee cusub ee cusub. Halkan waxaa ku qoran tirooyin asaasi ah oo tilmaamaya tilmaamahan:
Soosaarka ukunta beeraha ee khatarta ah ee loo yaqaan 'guinea white guinea' - 80-90 ukumaha xilli kasta, laakiin mararka qaarkood waxaa suurtagal ah in la helo boqol, taas oo qiyaastii rubuc ka badan ka badan tahay ciriiri "qaraabo";
celceliska miisaanka beedku waa 50 g (tani waxay la mid tahay ukumaha digaaga iyo 2 jeer ka badan miisaanka ukunta duurjoogta gawaarida duurjoogta ah);
bacriminta ukumo - 75-90%;
miisaanka nool ee shimbiraha qaangaarka ah: labka - 1.6-1.8 kg, haween - ilaa 2 kg;
miisaanka koritaanka ee dhalinyarta: isagoo ku dhashey tiro dhan 27-28 g, 2.5 bilood oo qashinka ah uu ku dhaco 0.9 kg oo miisaan, iyo 3 bilood oo miisaankoodu yahay 1.3 kg.
Waa muhiim! Qandhada fowlka Guinea waxaa ku jira 10-15% hilib ka badan hilibka digaaga, halka badeecadani yar tahay baruurta iyo in ka badan birta, yaraanta, taas oo la og yahay, waxay keenaysaa hoos u dhig heerka heerka hemoglobin ee dhiigga.
Hilibka ka mid ah xayawaanka guinea ee kiniisadda cadawga ah waa mid la yaab leh oo ah dhadhankiisa iyo qiimaha nafaqada sare. Inkasta oo wax soo saarka ukunta wanaagsan, taranku uu yahay mid hilib ah ujeedo dhaqaale. Marka la eego "dhibcaha daciifka ah" ee taranka waa in loo saaraa heer dhimasho heer sare ah oo ka mid ah chicks: waxay gaari kartaa 46-47%.
Si ka duwan turkiga, kuwaas oo sidoo kale qaraabada dhow ee hen, haadda guinea waa dabeecadda aan ahayn isku dhac. Si kastaba ha noqotee, dadka jilicsan ayaa xusuusinaya in jinsiyado cad oo Siberian ah ay u taagan yihiin si gaar ah oo isku dheelitiran oo isku dheelitiran. Shimbirahaasi waxay si cad u heli karaan iyagoo raacaya baadho kala duwan, si fududna ula socdaan dhammaan dadka deggan kaniisadda. Markay beeralayadu dheheen, shimbiraha guinea waxay la dagaallamayaan cayayaanka beerta, laakiin ma leh shimbiro kale.
Way fiicantahay in la barto sida loo boodo boogaha guinada guinea.
Cilada kaliya ee dabeecadda haadda guinea waa cabsi xad dhaaf ah. Waxay u isticmaalaan meel cusub muddo dheer, waxay ka baqayaan buuq, waxay si dhib leh u falceliyaan isbedel kasta ee xaaladaha xabsiga. Geli buuggani sidoo kale ma aha. Markaad isku daydo in aad gacmahaaga ka qaaddo dabeecad xasilan, wax raad ah ma hayo: Fowl guinea wuxuu bilaabmaa inuu si ba'an u xakameynayo, dareemayo carqalado iyo xitaa xoqdo, oo haddii milkiilaha aan cibaadada laheyn ay barkiisa ku hayaan, wuxuu u bixin doonaa iyaga oo aan laalaabi karin oo jaban. Tilmaamahan dabeecadda wuxuu noqon karaa mid waxyeello u gaysata ukumaha ukunta, sidaa daraadeed, beeralayda digaaga ee khibrad u leh ayaa u adeegsanaya ujeedkan qoryaha ama kobcinta.
Faa'iidada aan shuruudda lahayn ee caleenta Siberian cad waa ciriiri darro, wax qabad la'aan, isku dheelitirnaan wanaagsan iyo iska caabinta cudurada caadiga ah ee digaagga.
Fiiri liistada guriga iyo haraaga guinea duurjoogta ah.
Sababtoo ah tayadaas soo jiidashada leh, mowduucan shimbirkan kuma koobna dhibaatooyin gaar ah.
Dabeecada xasaasiga ah ee haraaga cadcad ee Siberian waxay u oggolaaneysaa in ay ka sii darayaan cufnaantooda. Waa in uu hagaa sharciyada noocan ah:
Da'da shimbiraha Tirada shaqsiyaadka halkii kiilomitirba. m square
Qodobada dhulka Waxyaabaha elektarooniga ah
Ilaa 10 asbuuc 15 31
11-20 toddobaad 8 17-18
21-30 usbuuc 6,5 10
Dadka waaweyn 5 5-6
Waa muhiim! Haddii ay aad u kululaato guriga inta lagu jiro bilaha xagaaga, qiimaha cufnaanta ee kor ku xusan waa in la yareeyo 15.-20 %.
White guinea White khudradda - shimbiraha qabow u adkaysta. Ma ka cabsiiso dhibco qabow ama heerkulka. Si kastaba ha ahaatee, qaanuunkan wuxuu u shaqeeyaa oo keliya haddii guriga uu qalal yahay, nadiif yahay mana jiraan wax qorshe ah. Waxaa muhiim ah in saqafka iyo derbiyada qolka ay si buuxda u siman yihiin. Dusha dusha sare uma aha mid ku habboon arrintan, waa in sidoo kale aysan jirin kala duwanaansho heerar, murugo iyo waxyaabo kale oo badan oo dhismaha ah. Dhulka waa in laga sameeyaa waxyaabaha ay si fiican u maydheen, oo si dhexdhexaad ahna u siman, si aan shimbiruhu u cageynin cagihiisa. Sida qashin ah waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo caws engegsan, sida balka dhirta qoyan, iyo peat waa habboon xilliga jiilaalka.
Daaqadaha daaqadda ee aagga waa inuu ahaadaa ugu yaraan 10% dhulka hoostiisa - Tani waxay keeni doontaa iftiin dabiici ah oo dabiici ah oo loo baahan yahay soosaarka ukunta sare Hawo wanaagsan, oo aan u oggolaaneynin in hawada laga saaro, kororka qoyaanka iyo horumarka fangaska, waa xaalad muhiim ah oo lagu ilaalinayo caafimaadka shimbirta.
Qalabka dhismaha ee guriga wuxuu ka kooban yahay daloolo, iyo sidoo kale nuujin iyo cabitaan. Waxa ugu wanaagsan in la sameeyo dib udulubyada ka soo wareega wareegyada leh dhexroor 40 mm, iyaga oo gelaya daaqado leh qalab yar (70-80 °). Xiddiga ugu horeeya waxaa lagu qosliyaa dhererka 40 cm kor ku yaal dabaqa, kan xigga ayaa la dhigayaa midka sare ee kan kale oo dhexda ah 25 cm.
Ma taqaanaa? Waxaa xiiso leh, Roomaanka qadiimka ah, iyo sidoo kale Giriigta, muddo dheer oo la daweeyey haadda guinea si gaar ah sida shimbiraha sacuudiga ah. Dhamaadka arrintani waxaa la dhigay by Emperor Guy Julius Caesar Augustus Germanic, aka Caligula, oo loo yaqaan ogaalnimada galmada iyo is-qabqabashada. Waxa uu ahaa "ninkii" u dhiibay golaha xildhibaanimada uu jecel yahay, oo sidoo kale wuxuu amar ku bixiyay inuu allabaryo u bixiyo, sida ilaah ilaah ah. Sidaa darteed haadda guinea waxay heleen miiska maskaxda, ka dibna waxay si tartiib tartiib ah uga soo jeesteen xayawaanka beerta cuntada caadiga ah.
Sida hannaanka heerkulka, waxay inta badan muhiim u tahay chicks iyo da 'yaryar, sababtoo ah, sida la sheegay, heerka cabsida ee shimbiraha ee marxaladaha hore ee nolosha ayaa ka baxaya wax badan oo la doonayo. Inta lagu jiro maalmaha ugu horreeya nolosha, Tsars wuxuu noqon doonaa inaanu ahayn mid diirran, laakiin aad u kulul: heerkulka ugu fiican waa inuu ahaado ugu yaraan + 35-36 ° C. Kadibna, si tartiib tartiib ah, hawada waxaa la bilaabay in la qaboojiyo sida hab nololeed 20-ka maalmood ee nolosha guurka ah ee kululaysa +25 ° C, iyo waqtiga ay gaaraan 3 bilood da'da waxay noqon doontaa + 18-16 ° C. Heerkulkani wuxuu u fiican yahay dadka waaweyn. Waa suurad wacan in aan hoos u dhicin +10 ° C. Xitaa daaqado aad u ballaaran oo guriga ku yaal ma siiyaan dadka deggan nal ku filan si ay u ilaaliyaan heerarka sare ee soo saarista. Ukunta-soo-saarka shimbiraha guinea waa in lagu dhiirrigeliyaa kororka macmalka ah ee iftiinka qoraxda isagoo ku daraya nalalka sida ku habboon nidaamka soo socda:
Da 'da' (da'da) Mudada caymiska maalintii dhexdeeda (tirada saacadaha)
1-3 toddobaad 20
4-11 toddobaad 16
12-15 toddobaad 12
16-30 toddobaad 8
Bilow wareeg soo saar leh +0.5 saacadood maalintii ilaa 16 saacadood
Laga bilaabo toddobaadkii 51aad +0.5 saacadood maalintii ilaa 18 saacadood
Intaa waxaa dheer, in shimbiraha wax soo saarka ukunta wanaagsan ay u baahan yihiin buulal. Waxay ka samaysan yihiin kabo alwaax ah oo leh aag ah 0.5 × 0.5 m iyo dhererka 0.4 m waxaana lagu dhejiyaa meelaha ugu qarsoon ee guriga ilaa 3 isbuuc ka hor inta aan la saarin ukunta.
Si ka duwan shimbiro kale oo badan, haraaga guinea cad cad ayaa si joogto ah loogu hayn karaa gudaha, iyo xitaa baqashada. Si kastaba ha ahaatee, dayrka socodka (waxaa sidoo kale loo yaqaan 'solarium') wuxuu noqon doonaa hadiyad dhab ah oo ah shimbir baadad ah, oo intaa dheer, waxay u ogolaan doontaa beeralayda in ay wax badan badbaadiyaan. Guinea waxay ku faantaa farxad weyn oo la burburin karo lamaanaha Colorado, xayawaanka, weevils, lafil, dhicin iyo cayayaanka kale ee khatarta ah ee beeraha, oo ay ku jiraan xitaa yaraanta jiirka.
Waa muhiim! Si ka duwan digaagga, fowlka guinea ma laha caado xun xun oo lagu beerayo beerta, taas oo hoos u dhigaysa xididdada dhirta, sidaas darteed ha ka tagin sawir "dhul dabin leh".
Si aad u sameysid shaybaarka, waxaad u baahan doontaa inaad degto aag isku mid ah oo ku yaal agagaarka guriga sida qolka laftiisa. Waa suurad wacan in dhulku ku yaryahay meeraha yaryar - tani waxay fududeyn doontaa nadiifinta dhulka ka soo qashin iyo "raadadka" ee shimbirta joogtada ah (cuntada, sariir, iwm). Guriga laftiisa, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qalabeeyo rinjiga 30x30 cm, kaas oo u furan dibadda, si shimbirku si xor ah u tagaan dibedda, beeralayda, albaabka furan, si khasaare ah uma dhaawacin dadka deggan. Gawaarida Guinea ma dhumiyeen kartidooda dabiiciga ah ee ay u duulaan, iyo 1.5 mitir sare oo loogu talagalay iyaga ma aha mid caqabad ku ah. Dad badan oo bilawga ah beeralayda digaaga ayaa aad u la yaabay si ay u arkaan sida kuwan aan aadka u quruxda badan u egyahay sida ay si fudud ugu duulaan geedkii ugu dhawaa oo ay daawadaan dhacdooyinka hoosta ka jira muddo dheer. Si aan lumin idaha qoryaha oo idil, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo baaliga baaliga ah ee haraaga guinea dhalinyarada ah hab gaar ah, ama si ay u daboosho solarium leh shabaqa dusha sare.
Sisiyaanka khatarta ah ee khatarta ah ee loo yaqaan 'guinea white guinea white' ma aha mid aad u culus oo ay cunaan. Shimbirahaasi waxay cuni karaan cunto, khudradda iyo xoolaha labadaba.
Waa muhiim! Marka la sameynayo raashinka loogu talagalay henoonka digaaga, waa inuu raacaa isla xeerarka khuseeya digaagga adoo isticmaalaya tilmaamaha ukunta.
Halbeeg gaar ah iyo tirada quudinta waxay si toos ah ugu xiran tahay shuruudaha shimbiraha, gaar ahaan haddii loo fidiyo suurtogalnimada socodka ama waa arrin wadista baabuurta.
Haddii inta lagu jiro maalinta oo dhan maalinta shimbirta shimbiraha ee hawada cusub, shimbirta waxay ka heli doontaa inta badan cuntooyinka cagaaran iyo borotiinka ah (kuwa lamid ah, geedka, dirxiga kale, cayayaanka kale). Xaaladdan, waa ku filan inaad ku siisid 1 quudinta fiidkii. Iyada oo lagu quudiyo, isku dhafka miraha kala duwan ayaa loo isticmaalaa (qaabka qalalan ama qaab digirta qoyan ee qoyan) ama quudinta caadiga ah. Dhammaan waxa loo baahan yahay marka laga reebo tani waa helitaanka joogtada ah oo nadiif ah iyo biyo nadiif ah ee khamriga ah, waana muhiim in aanay ahayn qabow ka heerkulka qolka. Cuntada bunkerka ah Maqnaanshaha socodka, hubinta cunto buuxda oo dheellitiran ee haadda guinea ayaa kudhaca gebi ahaan garbaha beerta. Qeybta ugu weyn ee quudinta - cagaarka cusub iyo cayayaanka kala duwan, marka lagu daro, kalluunka guinea waxaa la siiyaa khudradda, qashinka cuntada iyo quudinta isku dhafan, iyo sidoo kale dheellitirka macdanta. U hubso inaad ku darto naaneyska, xayawaanka, quraarada ganaaxa, ciidda webiga - tani lagama maarmaan ma aha in la bixiyo oo kaliya jirka oo leh kalsiyum iyo macdano kaleba, laakiin sidoo kale habka caadiga ah ee nidaamka dheef-shiidka.
Akhri cunto ku quud si aad u doorato haraaga guinea.
Kiiloogaraam kasta oo miisaankoodu nool yahay oo ay shaqaaleysiiyaan hiddaha guinea waxay u baahan yihiin 3 ilaa 3.3 kg oo cunto ah. Qaybinta noocyada kala duwan ee quudinta ee cuntada ayaa sidan u eg:
Nooca Cunnada Qiyaasta cuntada Tirada quudinta shimbirta sanadkiiba, kg
Cuntada Cagaaran 20 % 10-12
Cuntada xoolaha 7 % 3-4
Hubi iyo quudin 60 % 30-35
Root khudaarta iyo khudaarta kale 9 % 4-5
Kudaraynta Macdanta 4 % 2
Ku quudi shimbiraha in la xiro, waa inay noqdaan saddex jeer maalintii (xayawaanka yaryar waxay u baahan yihiin cunto badan). Marka la eego xaaladda dabeecadda shimbirta, raacitaanka adag ee nidaamka waa mid muhiim u ah: quudinta waa in had iyo jeer la fuliyaa waqti isku mid ah. Haddii aan lagu dhajin karin waxaa suurtogal ah in loo yeero khamriga Siberian ee khatarta ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu guulaha badan ee xoolaha nool ee Ruushka. Xayawaankan, saynisyahanada gudaha waxay ku guulaysteen inay isku daraan tilmaamayaasha wax soo saarka sare, dhadhanka hilibka ee wanaagsan, midabka iftiinka leh ee boogta, iyo sidoo kale iska caabin qabow oo cajiib ah. Caanaha waa wax weyn oo loogu talagalay sii kordhaya xaaladaha adag ee Siberia, xitaa xilliga jiilaalka iyada oo la ilaalinayo wax soo saarka ukunta iyo si dhakhso ah u hesho miisaanka. Iyo suurtogalnimada qul-qulatada unugyada ayaa kuu ogolaanaysa inaad sameyso nidaamkan xittaa soo jiidasho leh oo ka soo jeeda dhinaca dhaqaalaha.